Kedu esi zụta nkume dị egwu na Siem Reap?
nkume dị egwu, Siem Reap
Ọ bụrụ na i jikọtara ibe a, ọ nwere ike ịbụ oge.
Tupu ịzụta nkume ma ọ bụ ọla na Siem Reap, ọ dị mkpa ịgụ ozi dị n'okpuru ebe a.
Siem Reap bụ otu n'ime ebe ndị dị n'ụwa ebe e nwere mgbagwoju anya kachasị mma.
Dịka ebe ọ bụla njem nleta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. E nwere nnukwu ego nke ndị njem na-abịa maka ngwaahịa ndị na-adịghị ọcha, na-amara nke ọma na ndị njem nleta agaghị alọghachi ma ọlị, mgbe ha laghachiri mba ha.
Azu ojoo bara uru ọtụtụ iri puku dollar kwa ụbọchị na oge ndị njem nleta dị ala, na ọtụtụ puku dollar kwa ụbọchị n'oge nnukwu oge, site na November ruo March.
Nke a bụ ụzọ kachasị mma isi zere ego n'aka ndị njem na-emeghị ihe ike ma na-amụmụ ọnụ ọchị.
Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ, ndị mmadụ agaghị anwa ịghọgbu gị, ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile ị rịọrọ maka ndụmọdụ bụ akụkụ nke oke mafia a. Ya mere, atụlala onye ọ bụla obi: onye nduzi nlegharị, onye na-anabata ụlọ ahịa, onye na-anya ụgbọ ala, onye ọkwọ ụgbọ ala ...
Kwa ụbọchị, anyị na-ahụ ka ndị mmadụ na-abịa n'ụlọ akwụkwọ gemological, bụ ndị na-achọpụta na e mebisịla ha. Ha na-abịa ịnwale ihe omimi ha na ụlọ nyocha anyị mgbe anyị chọtara adreesị anyị na Google, ma ọ dịlarị oge. Site na mgbe onye ahịa ahụ hapụrụ ụlọ ahịa, ọ gafeela. Enweghi nkwụghachi.
Anyị enweghị ike ịgụta ugboro ole anyị hụrụ ka ụmụ nwanyị na-ebe ákwá mgbe ha ghọtara na ha ejirila narị otu narị ma ọ bụ puku dollar dị iche iche na ihe ndị na-enweghị atụ
N'ezie, e nwere ọtụtụ ụlọ ahịa ndị dị oké ọnụ ahịa, bụ ndị na-erite uru na ndị niile nọ n'etiti ha, ndị na-anabata ụlọ oriri na nkwari akụ, onye ọkwọ ụgbọala, onye ndu, na ndị ọzọ. Ndị a na-enyefe 50% nke ahịa ahịa ha
Ọ dị mfe ịgwa ndị na-eme njem nleta ihe ọ bụla n'ihi na ha aghọtaghị asụsụ obodo ahụ, ọ na-atọkwa ha ụtọ site n'ịmụmụ ọnụ ọchị na obiọma nke ndị enyi ọhụrụ ha.
Ọ bụrụ na ị rịọ onye intermediary ịkpọtụrụ anyị akwụkwọ, ebe a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe ha ga - aza gị: (ndị a bụ ihe nlereanya n'aka ndị ahịa anyị)
- "Agbalịrị m ịkpọ fon, ma ụlọ ahịa a mechie"
N'eziokwu, ọ dị njọ! Anyị na-emeghe n'afọ niile. 7 ụbọchị n'izu, 9 gaa 10 elekere
- "Ụlọ ahịa a na-ere ihe oyiyi ụgha, ma enwere m enyi nwere ụlọ ahịa, amaara m ya maka afọ 20, ị nwere ike ịtụkwasị ya obi. "
N'eziokwu, ọ dị njọ! Anyị na-ere ezigbo nkume dị iche iche, ọ bụkwa naanị anyị bụ!
- "Ọ dị anya site na ụlọ nkwari akụ gị, ọ dị mma ma dịtụghị anya"
N'eziokwu, ọ dị njọ! Anyi no n'ime Siem Reap
- "Ụlọ ahịa a adịghịzi adị, ha mechiri, ma amaara m ụlọ ahịa dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ, Aga m achụga gị n'ebe ahụ"
N'eziokwu, ọ dị njọ!
Ha nwere ike ịga nke ukwuu na ịgha ụgha na ịkpaghasị. Ha nwere ike ime ka ị na-echere ụbọchị, ruo mgbe ị ga-agbawa ma kwenye na ị ga-aga ụlọ ahịa ọzọ n'oge ikpeazụ, tupu ị gawa. N'ebe ahụ ị na-aga! N'ikpeazụ ị kwụsịrị!
Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji dee n'onwe gị. Ya mere, ị ga-abụ 100% echekwa. Anyị na-enye njem na-efu gị na ụlọ nkwari akụ gị. (Njem okirikiri)
Akwụsịla ịkpọtụrụ anyị. Ọ dịghị onye nwere ike ime ya karịa onwe gị. Anyị na-asụ bekee, french, khmer ...
- Ogwe oku: + 855 63 968 298
- Ekwentị mkpanaka / WhatsApp / Line / WeChat: + 855 92 615 288
- Facebook ozi: Gemological Institute of Cambodia
- Email: [Email na-echebe] (anyị na-aza n'ime obere oge)
Ihe ngbochi ndi ozo:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta akwa nkume site na ụlọ ahịa ọzọ n'ihi na ijiri n'aka na ọ bụ ezigbo nkume, rịọ maka akwụkwọ. Ịmara na onye gemologist gụsịrị akwụkwọ ga-ede akwụkwọ n'ezie, na ụlọ nyocha. Akwụkwọ ọ bụla ọzọ bụ adịgboroja
Ọ bụrụ na ụlọ ahịa na Siem Reap agwa gị na anyị nwere mmekọrịta ọnụ, ọ dị njọ. Anyị enweghị ndị mmekọ. Nke a abụghị n'ihi na ụlọ ahịa a nwere otu ma ọ bụ abụọ asambodo nyere site na ụlọ nyocha anyị nke pụtara na ọtụtụ puku nkume ndị ọzọ maka ire ere na ụlọ ahịa a bụ ezigbo. Ọ bụ kpọmkwem na-edebanye aha nkume ndị ọzọ na-egosi gị asambodo anyị. Ọ bụrụ na nkume ndị ọzọ a bụ eziokwu, ha ga-abụrịrị ndị e kwadoro otu.
Enweghị ụlọ ahịa ọkpụkpụ e depụtara na TripAdvisor na ụdị "Ịzụ ahịa" na Siem Reap ma e wezụga nke anyị. Jụọ onwe gị ajụjụ ahụ: gịnị mere? Iji chọpụta azịza ya, ihe niile ị ga-eme bụ ịghọta na ụlọ ahịa niile dị oké ọnụ ahịa jụrụ Kpugheere iji wepu akwukwo ha n'ihi na ha natara mkpesa banyere ugha.
Mara na anyi adighi anwa imebi ndi na ere ahia. Ọ bụghị ha niile bụ ndị na-adịghị akwụwa aka ọtọ, ụfọdụ na-eche n'echiche na ha na-ere ezigbo nkume dị iche iche, n'amaghị na ihe ndị ahụ dị egwu ma ọ bụ mesoo ha. Ma na njedebe, ihe ga-esi na ya pụta maka onye ahịa
Ugbu a dị: gemstones N'ogbe
Banyere Post chepụtara
Anya pezzotite nke Cat
Cat anya chrysoberyl
Cat si anya diaspore